MaAgency anoda iri Bhuku pane yavo Kofi Tafura | Martech Zone
MaAgency anoda Bhuku iri paKofi Tafura yavo
China, June 18, 2009 China, June 18, 2009 Douglas Karr
Makore mazhinji apfuura ndakaenda kuna shefu vangu ne, izvo zvandakafunga, yaive zano risinganzwisisike yekusimudzira kutengeswa kwegaraji kwakashambadzirwa kushambadza. Vaka chikumbiro chepamhepo apo anonyorera anogona kuwana imba yavo uye kuronga zuva rekushanyirwa kwegaraji. Pakati, vashambadziri vanogona kuisa coupon kana maviri masikati kana kofi.
Iyo nzira yakarongwa yaizopa iyo garaji kutengesa aficionado iine yakawanda nguva yekumhanyisa uye shoma nguva yekutyaira. Pamwe vaigona kusefa nezwi rakakosha, daro, nguva, nezvimwe. Wangu mukuru akafunga kuti zano raive rakakodzera ndikaenda ndikanotora mamwe makotesheni (pasi pe $ 10k panguva iyoyo).
Yakarambwa nekuda kwemubhadharo.
Yaiva a Akauraya Idea uye zvakandinetsa kwemakore mashanu kana matanhatu zvave zvichitenderera pamusoro wangu. Zuva parinovakwa, ini ndichaburitsa musodzi ndichiziva kuti ndingadai ndakave chikamu chechimwe chinhu chakakosha (iine zvimwe zvakawanda zvinoshanda). Nhasi ndiri kugomera mweya wekuzorodza sezvo wakazonyorwa mubhuku nyowani…
Ndakagamuchira bhuku rine butiro rakaoma (rakavakwa ne Mashoko okukwezva) nhasi mune tsamba uye inoshamisa zvechokwadi. Unyanzvi hwakatenderedza dhizaini yebhuku, hunhu hwekuburitswa, uye mazano mukati mebhuku rino riita rimwe remabhuku akakosheswa andingamboisa patafura yangu yekofi. Sangano rega rega rinofanirwa kuve nekopi!
Chinyorwa chepamutemo chakaburitswa pa Akauraya Mazano kunze kwevhiki ino uye kuvhota kuri! Ndingafarire yako vhota iyo Garage Kutengesa Mapper! Yakanga iri rukudzo kusarudzwa kune makumi mashanu ekupedzisira mazano ebhuku racho - Ndiri mune imwe tarenda rinoshamisa rekugadzira.
Chakavanzika cheSEM: Mhedzisiro yeGoogle Yakatarwa
Jun 18, 2009 pa 11: 54 PM
Ini ndaifanirwa kuvhotera yako Garaji Kutengesa Mapa… zvinosetsa kwazvo!
Jun 20, 2009 pa 3: 04 PM
Woohoo! Kutenda vhoti!